प्रभुत्व र यौनता मा सबमिशन - रोल प्ले
शेकहरू, चिसो, खुशी
कहिलेकाहीं सबै कुरालाई अनुमति दिइन्छ र अब केहि पनि नरोक्न सक्छ, यो कामुकता अनुभव र अनुभव गर्न गाह्रो हुन सक्छ। निरन्तर अस्थिरताले अधिकांश मानिसहरू कामुकता र कामुकताको भद्र बनाएको छ। यो निषेधको सासको कमी छ, जसबाट देखिने एकपटक यौन उत्साहित हुन्छन्।
प्रेम, होस र खेल
तर मानिस उनको अहिंसामा निरन्तर नवाचार र नविकरणको स्रोत हो। त्यसैले यसले कामुक जीवनमा नयाँ जीवन सास फेर्न व्यवस्थित गरेको छ।
तपाईंले केहि चीज खोज्नु भएको थियो, तर तपाईंले अझै पनि चीजहरू फेला पार्नु भएको छ कि अधिक वा कम निषेध छ र यसकारण रहस्यमय र निषेधको आरा घिमिरे छन्।
सम्बन्धको आधा-जीवन छोटो र छोटो हुन्छ, जुन कम्तीमा उल्लेख गरिएको ब्ल्यागिंगको कारण कम हुन सक्दैन।
त्यसैले यो दोहोर्याउने रोजगारीका लागि मात्र सहमतिको खोजी गर्न को लागी हो, जसको साथ सबैले राम्रो जीवन बिताउन सक्छन्, तर पनि निरन्तर रुपमा पुन: प्रयोग गर्न र यौन मार्गमा परिभाषित गर्दछन्।
प्राय: केहि कुरा नयाँ, त्यसैले बोल्न।
सबैजना कल्पना छ, तर कल्पना मात्र होइन, तर काल्पनिक पनि, कामुक कल्पनाहरू बढी विशिष्ट हुन। केहि संक्षेप वा कंक्रीट जसले व्यक्तिलाई पहिले देखि नै एक खुशी प्राप्त गर्दछ, यदि यो मात्र यसको बारेमा सोच्दछ। अक्सर, यी कामुक दीर्घकालीनहरू अचम्म रहन्छन् किनभने तिनीहरू खुल्ला र समझदार साथीसँग कुराकानी गर्दैनन्। तर यो हुनु हुँदैन, किनकि साझेदारसँग गोपनीय यौन इच्छाहरू छन्, जुन उसले जीवन बिताउन चाहान्छ।
यो एक जोडीको लागि यहाँ एक मौकाको लागि एकअर्कालाई कामुकता अर्को स्तरमा पुग्न मद्दत गर्न सकिन्छ - र यसले छोटो वार्तालाप भन्दा बढी नदिएको छैन।
साधारणतया, धेरै गोप्य इच्छा दुर्लभ छन् ... तर सामान्य हुन चाहानुहुन्छ? कसैले! निस्सन्देह, केहि काल्पनिकहरू अन्य भन्दा बढी सामान्य छ, तर सबै समान समान मूल्यवान छन् र समान प्रयास गर्ने योग्य।
यहाँ नयाँ को लागि साहसिक खोजशब्द हो
धेरै युगल प्रायः आश्चर्यचकित हुन्छन् कि उनीहरु नयाँ यौन अभ्यासहरू र तीव्र सकारात्मक प्रभावहरू पाउन सक्दछ जुन दैनिक जीवनमा अधिक संतोषजनक सेक्स जीवन हुन सक्छ।
धेरै मान्छे को एक सामान्य यौन फंतासी सबै प्रकारका बंधन समावेश गर्दछ। र यो नयाँ विकास होइन। यो साबित भएको छ कि मानिसजातिको सम्पूर्ण मूर्ख इतिहासले दासत्व र मनपराउन योग्य यौन घटना थियो।
कामुकता मा प्रभुत्व
prudish मध्य युग मा, मेसोपोटामिया देखि प्राचीन रोम extravagant वा पहिले संस्कृति जस्तै यो केही साझेदार को दासत्वबाट एक विशेष कामुक आकर्षण बारेमा वा आफै बढाउनका बाध्य भएर पनि अचम्मको थियो।
कुनै व्यक्तिलाई बाँध्ने तरिका अत्यन्त धेरै धेरै हुन् र जहाँ पनि धेरै खुशी ल्याउन सक्छ।
कामुक बांडेज खेलहरूको संसारमा नयाँ निकासको रूपमा, तपाईंले सम्भवतः यसलाई पहिलो पटक सजिलो बनाउनुपर्दछ। यो मतलब छैन कि यो जंगली हुन सक्दैन! केवल एक सम्भवतः पूर्णतया पूर्ण भाप संग काम गर्न को लागी प्रयास गर्न को लागी, तर बिस्तारै नजिक पुग्नु पर्छ। किनकी कहिलेकाहीँ धेरै धेरै उत्साह प्रयोग प्रारम्भमा अन्त्य गर्न सक्दछ - र तपाईलाई सम्भवतः केहि हदसम्म सुन्दर नदिनु साँच्चै धेरै कठोर भएर गफ गर्न सकिन्छ। मौनमा शक्ति छ।
घरमा सुरू गर्ने उत्तम तरिका र त्यहाँ सबै भन्दा राम्रो तरिकाले। किनकि घरेलु बेडले सामान्यतया उत्तम बंधन विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। बेड पोष्टहरू, टाउको र खुट्टा बिस्तार वा फ्रेमको पाटोको रूपमा उपयोगी हुन्छन्।
साथै, माध्यम को छनौट, जसको साथमा उनीहरूले आफ्नो प्रतिद्वंद्वीलाई बाँध्नु भनेको राम्रो योजना बनाउनु पर्छ। यो राम्रो नराम्रो सामग्री संग चढ्न उत्तम छ। एक राम्रो स्वाद शायद हो या एक नरम रस्सी - छाला र स्याक्स अझै पनि समय हुनेछ (र केहि र अधिक अभ्यास को आवश्यकता पनि हुनेछ)।
सुरुमा कुनै पनि तंग गुटहरू छैनन्। यद्यपि यदि साझेदारले यसको लागि सोध्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो हुन्छ कि नयाँ किचनले अब खोल्न सक्दैन ... जब सही तरिकाले प्रयोग गर्यो, उनीहरूले एक्कासी गन्टहरू आफुमा आफ्नै मार्न सक्छन्। यसकारण त्यहाँ निश्चित रूपमा केही गलत छैन।
यही कारण यो सुरूमा सही छ: सबै कुरालाई अनुमति दिइएको छ, तर केहि पनि भाग्नु हुँदैन!
केही मानिसहरू अरूमाथि शक्ति प्रयोग गर्ने विचार जस्तै, यसलाई शारीरिक रूपमा वा मानसिक रूपमा लिनुहोस्। अन्य मानिस, अर्कोतर्फ, शारीरिक रूपमा र पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा अर्को व्यक्तिले प्रभुत्व भइरहेको विचारलाई मनपर्छ।
यसको लागि धेरै कारण हुन सक्छ। अक्सर दैनिक जीवनमा अधीनमा मान्छे यौन धेरै प्रवल मानिसहरू कम्पनी वा अरू दृढ footing मा मूख्य स्थिति बारे छन् छन्। यो पनि बेडरूम बाहिर downright लजालु हुन सक्छ जो प्रवल व्यक्तिहरूसँग नै छ। तपाईं सधैँ के गर्न खोज्नुहुन्छ - यौन क्षेत्रमा पनि।
भूमिका खेल र प्रचलन
प्रभुत्व र भक्तिहरूको "गतिविधिका क्षेत्रहरू" लगभग असीमित छन्। प्रायः पहिले नै उल्लेख गरिएको बंधन गेमहरू प्रत्येक पार्टनरको भूमिका व्यक्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। तर निस्सन्देह यो "बस" बंधन खेलहरू भन्दा धेरै बढ्न सक्दछ।
केही भित्रीहरू शारीरिक पीडाको सामनामा विशेष आकर्षण महसुस गर्छन्। यो दुखाइ सिर्जना गर्न, तपाईँ विभिन्न प्रकारको उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ - यसलाई ह्वाइप्स, ह्वाइप्स वा क्लबहरू वा ब्याट्सन गर्नुहोस्। केहि जस्तै यो अरु भन्दा धेरै कठिन।
तर मानसिक पीडा बिजुली खेलहरु को बेडरूम मा असामान्य छैन खेल को शक्ति को प्रवृत्ति। शब्द वा वास्तविक मनोवैज्ञानिक यातना विधिहरू को attenuated प्रकारका गरेर, गहिरो मनोवैज्ञानिक घाउ हुन सक्छ ... पाठ्यक्रम तिनीहरूले स्थायी र कार्य को क्षण मा मात्र इच्छा वृद्धि प्रयोग गरिन्छ।
तपाईं आफ्नो गार्डमा हुनुपर्दछ न कि यो ओभरडाउन। प्रत्येक कार्य भन्दा अघि तपाईंले पार्टनरसँग एक तथाकथित "सुरक्षित शब्द" बाहिर निकाल्नु पर्छ। यदि यो सुरक्षित शब्द भनिन्छ भने, सबै कार्यहरू तुरुन्तै र आपत्तिजनक बिना रोकिनु पर्छ। नतिजाको रूपमा, एक अधीन भागको रूपमा, तपाईंसँग एक निश्चितता छ कि तपाईं धेरै गाह्रो हुने छैन।
दृश्यको केहि दिग्गज भन्छन् कि "जब रगत खानु पर्दछ", अरूसँग, त्यसपछि मात्र एकदम रमाईलो सुरु हुन्छ। यो एक अत्यन्त व्यक्तिगत विषय हो जहाँ सबैले आफ्नै सीमाको परीक्षण गर्नु पर्छ। अधिकतम यौन उपयोगको लागि कत्तिको दुखाइ अनुभवी वा अभ्यास गर्नुको लागि कुनै सार्वभौमिक नुस्खा छैन। तर यो बनी रहन्छ: सबै कुरामा मध्यस्थता।